प्रचण्डको प्रस्ताव एकताविरोधी ‘कू’को यात्रा
विचार मंसिर १७, २०७७
सुशासन र विकासमार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने काममा मैले आपूmलाई केन्द्रित गरेको छु र गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु।
देशमा स्थिरता र स्थायित्व आवश्यक छ। हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको, बलिदान गरेर ल्याएको, हजारौं नेपालीको जीवन बलिदानबाट प्राप्त गरेको र लाखौको योगदानबाट प्राप्त यस प्रणालीको सुरक्षा, सुदृढीकरण र सफल कार्यान्वयनद्धारा अगाडि बढ्ने, बढाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ।
मैले दुःखका साथ भन्नु पर्छ, मेरो टिमबाट र टिमभन्दा बढी शीर्ष स्थानहरूबाट यी कामहरू गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा मैले के–कति सहयोग प्राप्त गरेको छु? जगजाहेर नै छ। मैले यसमा केही भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन।
मैले पार्टी मान्दिनँ, पार्टीका निर्णय मान्दिनँ भन्यो भन्नेजस्ता कुराहरू असान्दर्भिक ढंगले कुराहरू उठाइएको छ। अहिलेको बहुमत, अहिलेको अल्पमत कुनै प्रक्रियाबाट आएको अल्पमत र बहुमत होइन। यो अल्पमत र बहुमत कृत्रिम र अनुचित हो। यो कुबेलामा गरिएको अनुचित स्वार्थहरूको गठजोड र गलत मनशायद्वारा आफ्ना कुण्ठा, आक्रोश र विरोध पोख्न त्यस प्रकारले आएको छ।
अल्पमतमा पर्ने नै गरी एकता गरेको थिएँ। पूर्व एमालेभित्रको स्थिति पनि हामी सबैलाई थाहा थियो र फेरि पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको संख्यासमेत जोड्दा के हुन्छ? त्यो पनि थाहा थियो र थाहा छ।
एकतातर्फ जाँदाखेरी, एकताको भावनाका साथ जाँदाखेरी त्यस्तो संख्याले केही पनि बिगार्दैन।
त्यही हो भने चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौं भनेर हामीले भनेका छौं, गर्छाैं भनेका छौं र महाधिवेशन गरौं। लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि! बहुमत को हो? अल्पमत को हो? त्यो गरे भइगो।
त्यही निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा वार्ता गरेको हुँ, एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ र दुई अध्यक्षको प्रबन्ध गरेर एक अध्यक्ष भएको हुँ। यो सब त्यही पृष्ठभूमिमा हो । अरु दावी गर्ने साथीहरू त कमसेकम १३–१४ वर्ष, १५–१६ वर्ष र ३२–३३ वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाउनु नै भएको होला ! उहाँहरूले त्याग गर्नु नपर्ने? लोकप्रियताको पनि बहुतै कुरा चल्यो। ठीकै छ, भोलि चुनावहरू पनि आउँछन्, जनता र कार्यकर्ताले जाँचून हाम्रो लोकप्रियता, के भएको छ र? हेरौं। जाँचौंला।
महाधिवेशनहरू, अधिवेशनहरू हुन्छन्, जाँचौंला। ठीक छ नि! बीचमा हतार किन गर्ने र? ‘कू’ को शैलीमा एकता–एकीकरणको बाटो छाडेर सत्तापलट अथवा कब्जा, यस्ता अनुचित बाटोबाट कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने? के यी कामहरूले हामीलाई एकताको बिन्दुमा पु¥याउँछन्?
त्यतापट्टि पनि हाम्रो थोरै ध्यान मनदेखि नै जाने काम होस्। तर, हामी बहुतै चतुर खेलाडी निस्कियौं। शब्द एक प्रकारको र व्यवहार अर्कै प्रकारको! अर्थात्, एक खालको शब्द, अर्को खालको व्यवहार गरेर चकित पारिरहेका छौं!
आमरूपमा भन्ने हो भने केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर भन्ने हो भने खिचोला र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकांक्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भए। मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, बैठकको संख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढौं र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन्
अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो? कि पार्टी कब्जा भइसक्यो? पार्टीका नामबाट र पार्टीको दस्तावेज भनेर त्यो कसरी गयो र पार्टीले प्रकाशन र प्रशारण गर्ने निर्णय कहिले गर्यौें? वितरण गर्ने निर्णय कहिले गर्यौें? पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर कार्यालयबाट प्रकाशन गर्ने निणर्य कहिले गर्यौें? इजाजत कहिले दियो पार्टीले? यति हदसम्मको बेथिति गर्ने? गुटबन्दी त थियो थियो, अब त गुटबन्दीभन्दा बढी बेथिति र मानिलिऔं यो पार्टी कब्जा नै भइसक्यो? साथीहरूले पद्धति, प्रक्रिया र विधि निकै सिकाउनु हुन्छ। भन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ तर व्यवहार …?
२०७७ भदौ २६ गते हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौं। भोलिपल्ट बिहान गुटको भेला भएर त्यस निष्कर्षलाई ‘यो अस्थायी युद्धविराम हो, अहिले हामीसँग पर्याप्त तयारी पुगेन, तयारी नपुगेसम्मका लागि मात्र यो युद्धविराम हो’ भन्ने कुरा गरियो। मैले त्यसैबेला अर्का अध्यक्षलाई यो के भएको हो भनेर सोधेँ ? त्यस विषयमा अहिले नजाऔं।
आमरूपमा भन्ने हो भने केही औपचारिकताका कुरालाई छाडेर भन्ने हो भने खिचोला र झमेला, कुण्ठा र विरोध, आकांक्षा र अतृप्तिका कुराहरू छर्ने र छिरल्ने बैठकहरू भए। मैले बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, बैठकको संख्या मात्रै धेरै गर्ने होइन, बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले गरौं, व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढौं र बैठक बसेपछि यस बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर मान्छेहरूले हेर्छन्। के निर्णय गर्छ भनेर हेर्ने भएपछि हामीले देश र जनतालाई बैठकका निष्कर्ष र निर्णयहरू यी हुन् भनेर दिनसक्नु पर्दछ, यस्तो व्यवस्थित बैठक गरौं भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छु।
अनि बैठकहरूमा कोभिडको सन्दर्भम थुप्रै छलफल गर्यौंै।
आज पनि हामी देशका बारेमा सोच्न सकिराखेका छैनौं। जबकि हामी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गरिराखेका छौं। अनुकूल बनाइराखेका छौं। भारतका विदेश सचिव नेपाल आए र दुईपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउने, आपसी समस्याहरू वार्ताबाट समाधान गर्ने भन्ने कुराकानी भयो र समाधान गर्न नसकिने कुनै समस्या छैनन् भनेका छन्।
हाम्रा विषय त कसरी मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ? कसरी झूठफरेव फिजाउन सकिन्छ? कसरी भ्रममा पार्न सकिन्छ र मान्छेहरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ र तथाकथित बहुमत कसरी पु¥याउन सकिन्छ? त्यसमा केन्द्रित छ।
प्रचण्डजीले भन्नुभएको म सम्झन्छु, ‘बाटो बिराइएको छ भने पुरानै ठाउँमा फर्किनुपर्छ र त्यसलाई त्यहीँबाट सच्याइनु पर्छ।’ ल, ठीक छ, त्यसै गरौँ। फेरि फर्किएर त्यहीँ जाऔं, २०७५ साल जेठ २ गते नै फर्किऔं। र, त्यहीँबाट फेरि सुरु गरौं। हाम्रा उद्देश्यहरू यथावत् नै छन् भने हाम्रो एकताको आवश्यकताको बोध यथावत छ भने, अहिले पनि हामीले त्यसलाई सान्दर्भिक देख्छौं भने जेठ २ गते नै फर्केर जाऔं।
एउटा विधि र प्रक्रिया पु¥याएर हामीले दुई पार्टीको एकतापछि संयुक्त राष्ट्रिय मञ्च आयोजना गर्ने भन्यौं । हामीले नीतिको, विधिको, संरचनाको र नेतृत्वको छिनोफानो गरिसक्यौं। अब यो स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि स्वभाविक रूपमा संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार बहुमत, अल्पमतको आधारमा नै पार्टी चल्छ । यो घोषणा गरौं र त्यो विधि बदलौ र अगाडि बढौं।
र, यही अस्वीकारोक्तिका साथ मैले जुन प्रस्ताव तयार गरेको छु, त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। अहिलेलाई यत्ति नै।
(सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले राखेको विचार)
Previous Postत्रिवि उपप्राध्यापकको नतिजा सम्बन्धमा अदालतमा रिट
Next Postसङ्क्रमित बालबालिकालाई शिक्षा आर्जनमा समस्या